तपाईंले कति घण्टा सुत्नु पर्छ ? - नेपालबहस
तपाईंले कति घण्टा सुत्नु पर्छ ?
१३ पुस काठमाडौं । एक अध्ययनले युवा वयस्कले सात देखि नौ घण्टासम्म सुत्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय निद्रा फाउण्डेशनले गरेको अनुसन्धानमा जनाइए अनुसार विभिन्न उमेरका मानिसहरुको निद्राको आवश्यकता पनि फरक हुने गर्छ।
तपाईंले कति घण्टा सुत्नु पर्छ ? हामीहरु प्राय: ले आफूलाई पर्याप्त निद्रा नपुगेको सहजै थाहा पाउछौं। तर पर्याप्त निद्रा भनको कति हो त ? अमेरिकामा हालै गरिएको एक अनुसन्धानले भनेको छ त्यो तपाईंको उमेरमा भर पर्छ। सुत्ने नियमितताको अभाव, मदिरा, कफी र इनर्जी ड्रिंक्स जस्ता पेय पदार्थको सेवन, अलार्म घडी र दिनको प्रकाश जस्ता कुराहरुले मानिसको बायोलोजीकल क्लक अर्थात जैविक घडीलाई प्रभावित गर्ने गर्छ।
अमेरिकामा भर्जीनीया राज्यको आर्लींगटनमा कार्यालय रहेको निद्रा विषयमा अनुसन्धान गर्ने एउटा संस्था न्याशनल स्लीप फाउण्डेशनका अनुसार व्यक्तिको निद्राको आवश्यकता उस्को जीवनशैलीमा आधारित हुने गर्छ। नवजात शिशुहरुलाई अरु उमेरका मानिसभन्दा बढी निन्द्राको आवश्यकता पर्छ, तिनीहरुका लागि १९ घण्टासम्म सुत्नु सामान्य हो। तर उमेरले पनि मानिसको निन्द्राको आवश्यकतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारण गर्ने गर्छ।
नवजात ‘३ महिना’ भर्खर जन्मेका बच्चाहरुले सामान्यतया दैनिक ११ देखि १३ घण्टा सुत्दा पनि तिनीहरुलाई निद्रा पुग्छ, तर १९ घण्टाभन्दा बढी सुत्न दिनु हुंदैन। शिशु ‘४-११ महिना’ यिनीहरुका लागि उपयुक्त १२ देखि १५ घण्टाको निद्रा हो। कम्तीमा १० घण्टा सुत्दा पनि निद्रा पुग्न सक्छ तर शिशुहरुलाई १८ घण्टाभन्दा बढी कहिल्यै सुत्न दिनु हुंदैन।
वामे सर्नेहरु ‘१-२ बर्ष’ यो उमेरका बच्चाहरुले ११ देखि १४ घण्टा सुत्नु पर्छ। यिनीहरुका लागि स्वीकार्य ‌९ देखि १६ घण्टाको निद्रा हो। विद्यालय जानु अघिका ‘३-५ बर्ष’ विशेषज्ञहरु यो उमेर समूहका बच्चाहरुले १० देखि १३ घण्टा सुत्नु पर्ने बताएका छन्। तर ८ घण्टाभन्दा कम र १४ घण्टा भन्दा बढी निद्रा यिनीहरुलाई उपयुक्त हुंदैन।
स्कुले उमेरका ‘६-१३ बर्ष’ अमेरिकी निद्रा फाउण्डेशनका अनुसार यो उमेरकाहरुले ९ देखि ११ घण्टा सुत्नुपर्छ। ७ घण्टा भन्दा कम र १२ घण्टा भन्दा बढीको निद्रा यिनीहरुका लागि स्वस्थ मानिएको छैन।
किशोरकिशोरी ‘१४-१७ बर्ष’ किशोरकिशोरीहरुका लागि सुझाइएको निद्राको अवधि ८ देखि १० घण्टा हो। तर यिनीहरुले ११ घण्टाभन्दा बढी र ७ घण्टाभन्दा कम सुत्नु उपयुक्त नहुने अमेरिकी निद्रा फाउण्डेशनले जनाएको छ। युवा ‘१८-२५ बर्ष’ युवा उमेर समूहकाहरुले ७ देखि ९ घण्टा सुत्नु उपयुक्त हो। तर यिनीहरुले ६ घण्टा भन्दा कम र ११ घण्टा भन्दा बढी सुत्नु हुंदैन।
वयस्क ‘२६-६४ बर्ष’ यो उमेर समूहका लागि सुझाइएको निद्राको अवधि युवाहरुको लागि जस्तै छ। बृद्ध ‘६५ बर्ष भन्दा माथि’ यो उमेर समूहका मानिसहरुका लागि दैनिक ७-८ घण्टाको निद्रा स्वस्थ मानिएको छ। तर यिनीहरुले ५ घण्टाभन्दा कम र ९ घण्टाभन्दा बढी सुत्नु स्वस्थ होइन। निद्रा अपुग हुंदा मानिसको स्वास्थ्य र सकृयतामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ।
स्वस्थ निद्राको बानी
अमेरिकाको राष्ट्रिय निद्रा फाउण्डेशनका निद्रा विज्ञहरुले निद्रा सुधार्नका लागि केहि सुझावहरु पनि प्रकाशित गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार निद्रालाई सबैले पहिलो प्राथमिकतामा राख्‍नु पर्छ।
तिनीहरुले दिएका केहि सुझावहरु यस्ता छन्
सुत्ने एउटा निश्चित समय बनाउनु पर्छ र त्यस्लाई सप्ताहान्तको छुट्टीको बेलामा पनि पालना गर्नु पर्छ।
सुत्नु अघि मनमष्तिष्क शान्त हुने अभ्यास गर्नु पर्छ।
दैनिक कसरत गर्नु पर्छ।
सुत्ने कोठाको तापक्रम, त्यहां बाहिरबाट आउने आवाज र प्रकाशलाई आफू अनुकुलको राख्‍नु पर्छ।
आरामदायी विछ्यौना र तकियाको प्रयोग गर्नुपर्छ।
मदिरा र क्याफेन जस्ता निद्रा विगार्ने पदार्थहरुको सेवन गर्नु हुंदैन।सुत्नुअघि विद्युतिय उपकरणहरु बन्द गर्नु पर्छ।
जखेरा तालमा डुङ्गा सयर गर्दै आन्तरिक पर्यटक ३ मिनेट पहिले
लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी, बैशाख १७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने १४ मिनेट पहिले
दिल्लीका अस्पतामा अक्सिजनको अभाव, खेतबारीमै शवको अन्त्येष्टि गर्न अनुमति १४ मिनेट पहिले
डोटीमा मृतावस्थामा भेटिएकी महिलाको पहिचान खुल्यो २३ मिनेट पहिले
आजदेखि पशुपति क्षेत्रका सबै मन्दिर बन्द ३१ मिनेट पहिले
कोभिड खोप लगाएका र पहिले पनि संक्रमण देखिएका वीर अस्पतालका १५ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित ३५ मिनेट पहिले
बिरामीका लागि कर्णालीमा एम्बुलेन्स र हेलिकोप्टर व्यवस्था ३७ मिनेट पहिले
भेषभूषामा सजिएका आमा समूह ४० मिनेट पहिले
गोरखामा नगद चोरी गरी फरार युवक पक्राउ ४४ मिनेट पहिले
दुधौलीका तीन वडा एक हप्ताका लागि बन्द ४८ मिनेट पहिले
फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छायाँ ५१ मिनेट पहिले
२४ वर्षपछि सडक कालोपत्र हुँदा स्थानीयमा खुशी ५३ मिनेट पहिले
आईपीएलः आज आरसीबी र राजस्थान भिड्दै, यस्तो छ सम्भावित प्लेइङ–११ १ दिन पहिले
राङराङ थलीमा पोखरीसहित पार्क निर्माण १ हप्ता पहिले
लक्ष्मी बैंकको नयाँ शाखा कास्कीको लेखनाथमा १ हप्ता पहिले
आलुको उचित मूल्य नपाउँदा किसान मारमा ४ हप्ता पहिले
निर्देशक लामा ‘लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’बाट सम्मानित ३ हप्ता पहिले
रोकिएको प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने १ महिना पहिले
विराटनगरमा ६४१ को परीक्षण नेगेटिभ, १२ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी १२ महिना पहिले
साङ्केतिक भाषाको प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान ७ महिना पहिले
मौवाखोलाको पुल मोटरसाइकल हिड्ने बन्यो ९ महिना पहिले